ဓာတ်ပုံထဲကို လှပတဲ့ filter လေးတွေပေါင်းစပ်ထည့်သွင်းနိုင်မယ့် Fade It – AsiaApps
December 27, 2018 MoonReviewsNo Comment on ဓာတ်ပုံထဲကို လှပတဲ့ filter လေးတွေပေါင်းစပ်ထည့်သွင်းနိုင်မယ့် Fade It
ဒီတစ်ခေါက် Asiaapps က ပရိသတ်ကြီးကို မိတ်ဆက်ပေးချင်တဲ့ app မ်လေကတော့ Fade It ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Fade It က ကိုယ်ရဲ့ ဓာတ်ပုံတွေမှာ အကောင်းဆုံး filter တွေထည့်သွင်းချင်တဲ့သူတွေ အထူးသဖြင့် မိန်းကလေးတွေ နှစ်သက်သဘောကျမယ့် app လေးဖြစ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့် မိန်းကလေးတွေ နှစ်သက်သဘောကြရတာလဲဆိုတော့ သူ့ရဲ့ filter လေးတွေက အရမ်းအရမ်းကိုမှ ချစ်စရာကောင်းနေလို့ပါ။ Fade It ကို ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်နဲ့ သုံးတတ်သွားပြီဆိုရင် ကိုယ့်ရဲ့ ဓာတ်ပုံတိုင်းက ခေတ်မှီလှပသွားတော့မှာပါနော်။ အောက်မှာ Fade It နဲ့ပြင်ထားတဲ့ နမူနာ ဓာတ်ပုံလေးတွေကိုပြထားပါတယ်။
ဘယ်လိုလဲ ဓာတ်ပုံလေးတွေကိုကြည့်ပြီး Fade It ကို သုံးချင်သွားပြီမဟုတ်လား ??? မင်မင်လည်း အတူတူပါပဲ မြင်မြင်ချင်းမှာပဲ အရမ်းကို သုံးချင်သွားတာပါ။ ?)
သူက ပထမဦးဆုံး filter platform app တစ်ခုဖြစ်ပြီး သူ့ထဲမှာ filter အသစ်တွေ၊ artistic aesthetics တွေနဲ့ style အမျိုးအမျိုးကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်။ အမြဲတမ်းလိုလို ရေပမ်းစားနေတဲ့ update အသစ်တွေကို ပြုလုပ်ပေးနေတာကြောင့်လည်း တကယ့်ကိုအသစ်အဆန်းတွေနဲ့ ခေတ်မီတဲ့ app လေးပါ။ App ထဲမှာ ကိုယ့်ရဲ့ selfie တွေနဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကို အနုပညာမြောက်တဲ့ filter တွေ၊ effect တွေ၊ neon, tints, overlays စတာတွေနဲ့ ပြင်ဆင်နိုင်မှာပါ။ လှပတဲ့ ဓာတ်ပုံလေးတွေကို ခေတ်မီတဲ့ ဒီဇိုင်းကာလာနဲ့ ပြန်edit လုပ်ချင်တဲ့ သူတွေ ရွေးချယ်သင့်တဲ့ app ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ကို App Store မှာ အခမဲ့ download လုပ်နိုင်ပါတယ်နော်။ Photo editing app ဆိုရင် မနေနိုင်ပဲ သုံးကို သုံးကြည့်ချင်တဲ့ချိမတို့ အသုံးပြုနိုင်ဖို့ မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်။ ချိဖတို့လည်း ကိုယ့်ရဲ့ နှောင်ကြိုးလေးတွေရဲ့ ဓာတ်ပုံလေးတွေကို ပြင်ပေးလို့ရတယ်နော်…ဟဲဟဲ ?)
Download link – iOS (Appadvice/ Appstore)